उद्यममा पनि अब्बल अर्थमन्त्री आङ्बो «
- दिपक बोहोरा-मनिषा चम्लागाईँ
पाँचथर-झापा-भनिन्छ, राजनीति पेशा होइन समाज सेवा हो । तर, नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिमा लागेका धेरै नेताको आम्दानीको अन्य स्रोत नदेखिँदा राजनीतिलाई पेशा बनाएको आरोप सुन्ने गरिएको छ । आम्दानिको निरन्तर स्रोत नहुँदा भ्रष्टचार मैलाएको आरोप समेत सुनिन्छ । तर, पछिल्लो समय राजनीतिमा आएका युवानेतामा राजनीति पेशा होइन सेवा हो भन्ने कुरालाई सार्थक बनाउने प्रयास गरिरहेका युवा नेता उतिकै पनि छन् ।
प्रदेश –१का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले पछिल्लो समय यस प्रदेशकै उदाहरणीय नेताको परिचय बनाएका छन् । उनी मन्त्रीका नामले मात्र होइन कामले पनि जनता माझ लोकप्रिय छन् । विकास निर्माण तथा प्रदेशको समृद्धिको पाटामा उनले गरेका पछिल्ला कामले प्रदेशमा उनको लोकप्रियता बढेको पाइन्छ । वि.स २०७४ सालमा भएको प्रदेश सभाको चुनावमा पाँचथरको क्षेत्रनम्बर ‘ख’ बाट तत्कालिन बामगठबन्धनका तर्फबाट चुनाबमा बिजयी भएपछि प्रदेश–१का आर्थिक मामीलातथा योजना मन्त्रीको जिम्बेवारी पाएका युवा नेता हुन् इन्द्र बहादुर आङ्बो ‘मौसम’ कलिलै उमेरबाट तत्कालिन माओबादी पार्टीको राजनितिमा लागेका आङ्बो भुमिगत जीबन बिताउदैँ संसद हुदैँ मन्त्री बनेर प्रदेश हाकिरहेका छन् ।
संसदीय अभ्यासमा पहिलो पटक सहभागी हुँदै चुनाब समेत जितेर मन्त्री बनेका आङ्बो प्रदेश–१मा काम गरेर लोकप्रिय बनेका छन् ।
पछिल्लो समय राजनीति क्षेत्रमा लाग्नेहरुको आर्थिक स्रोत नहुदाँ राजनिति क्षेत्र फोहर हुदँै गएको पनि सुनिदै आएको हो । तर, नेता आङ्बो भने आठ वर्ष अगाडीबाट युवा उद्यमीका रुपमा पनि चिनिन्छन् । संसद र मन्त्री बन्नु भन्दा पहिलादेखि नै आङ्बोले बंगुर फर्म सञ्चालन गर्दै आएका थिए । झापाको दमक नगरपालिकादेखि उत्तर तर्फ पर्ने पर्ने इलाम जिल्लाको चुलाचुली गाँउपालिका–१ मा एक बिगाह जमिनमा बंगुर फर्म सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
वि.स २०६९ सालबाट बंगुर फर्म सञ्चालन गर्दै आएका आङ्बो राजनीतिक क्षेत्रमा आउने जो सुकै नेताको कुनै न कुनै व्यवसाय तथा नियमित आर्थिक स्रोत हुनु पर्ने बताउँछन् । “अहिलेका युवापुस्ताले राजनीतिलाई फोहोरी खेल सोच्नुमा नेताको अन्य आम्दानिको स्रोत नदेख्नु नै हो” आङ्बो भन्छन् । यसलाई सुधार गर्न पनि राजनीतिमा लागेकाको कुनै न कुनै व्यवसाय हुन जरुरी छ ।
इलामको चुलाचुलिमा तत्कालिन समयमा ४० लाख रुपैँयामा एक बिघा जग्गाकिनेर बंगुर फर्म सुरु गरेको आङ्बोले बताए । “जेनतेन गरेर ४० लाखरुपैँया तयार गरियो फर्म सुरु गर्न आवश्यक रकम भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट ऋण लिए” मन्त्री आङवोले भने, “करिब ३ करोड लागतमा फर्म सञ्चालनमा ल्याए ।” फर्म सञ्चालनको लागी विभिन्न संरचना निर्माण गर्न मात्र २ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनको भनाई छ । बैंकबाट १५ वर्षको लागी ऋण लिएर फर्म सञ्चालन गरेको आङ्बो बताउँछन् । अहिले फर्मले वर्षेनि ऋणको ब्याज घटाउदैं लगेको मन्त्री आङ्बोले बताए ।
फर्ममा करिब २ सय ५० हाराहारीमा बंगुर छन् । फर्ममा २, ३ जना सहयोगिले फर्म सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । “आफु पहिलाबाटै फुल टाइमरको रुपमा राजनीतिमा लागीयो, अझ मन्त्री भए पछि त समय दिनै सकेको छैन, फर्मको सबै व्यवस्थापक श्रीमती कुमारी लावतीले गरिरहनु भएको छ” आङ्बोले भने । मन्त्रीकै फर्म भए पछि त सरकारी अनुदान त टन्नै ल्याउनु भएको होला नि ? भन्ने प्रश्नमा अहिलेसम्म कुनै सरकारी अनुदान नल्याएको आङ्बोले बताए । अनुदानको नाममा ब्रह्मलुट गर्नु हुदँैन भनेर आफ्नो फर्ममा अनुदान नलिएको मन्त्री आङ्बो बताउँछन् ।
फर्मको आम्दानीले बैंकको ऋण तिरिरहेकाले फर्म नाफा घाटा कतै नरहेको आङ्बो बताउँछन्् । “फर्मबाटै ३ परिबाको रोजगार सृजना भएको छ, यसमा खुशी छु” मन्त्री आङ्बोले भने । मन्त्री भएपछि फुर्सद नमिल्ने र फुर्सद मिलेको समयमा फर्ममा पुग्ने गरेको आङ्बो बताउँछन् । “फुर्सद भएको बेलाफर्ममा पुगेर बंगुरहरुको सरसफाइ र खोप लगाउने कार्य गर्छु । किसानको छोरा भएकाले यि काम गर्न मलाई कुनै अप्ठायारो छैन ।” मन्त्री आङ्बोले भने ।
बंगुर फर्म सञ्चालनमा के– के समस्या रहेका छन् ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री आङ्बो भन्छन्, “अहिले नेपालमा बंगुरको लागी गुणस्तरीय दानाको अभाब रहेको छ” एकातिर बजारको सुनिश्चता नहुने र अर्को तिर बिज्ञ प्राबिधिक नहुदाँ बंगुरपालक किसानले दुःख पाउने गरेको मन्त्री बताउँछन् । चाहेको बेला बंगुरको लागी आवश्यक पर्ने औषधी र भिटामिन नपाउने लगायताका समस्याहरु रहेको आङ्बोको अनुभव छ ।
बंगुर पालनमा किसानलाई आकर्षित गर्न सरकाले अनुदानबाहेक तालिम, बंगुरको लागी बिभिन्न खोप, औषधि र बजार सुनिश्चता गर्नुपर्ने आङ्बो बताउँछन् । यसै गर्न सकेमा बंगुर पालन किसानलाई ठुलो राहात पुग्ने उनको तर्क छ । फर्म सञ्चालन गर्नका लागी ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले सरकाले बंगुरपालक किसानको लागि सफ्ट लोन र पोजेक्ट लोनको व्यवस्था गर्ने हो भने यो व्यवसायले गति लिने मन्त्री आङ्बोले बताए ।
अहिलेको सरकाले रकम नै अनुदान दिने प्रचलनले सानाकिसानलाई फाइदा पुगे पनि ठुला किसानलाई फाइदा पुग्न नसकेको मन्त्री आङ्बोको ठहर छ । यसको लागि ठूला किसानलाई सफ्ट लोन र पोजेक्ट लोनको व्यवस्था गर्दा युवालाई कृषिमा आर्कषित गर्न सकिने आङ्बो बताउँछन् । युवालाई कृषिमा आर्कषित गर्न सके युवालाई विदेश पलायन रोक्न सकिने मन्त्री आङ्बो बताउँछन् ।
दिपक बोहोरा-मनिषा चम्लागाईँ